Le kota khange ilunge kuthengiso lweMac, kodwa ayilunganga kwiiPCs | Ndisuka mac
Le kota khange ilunge kuthengiso lweMac, kodwa hayi iiPC
Ngokuqinisekileyo kubonakala ukuba ukuthengiswa kweekhompyuter ngokubanzi akuhambi ngeyona mihla yabo intle. I-Apple nayo ayibaleki ukusuka ekuhlisweni kwentengiso kule kota kwaye kubonakala ngathi iziphumo zezemali ezizayo aziyi kuba zezona zilungileyo kwicandelo leekhompyuter.
Inkampani yophando uGartner inoxanduva lokuqokelela le datha yokuhambisa ngenqanawa ye-Apple yekota yesithathu yale 3 kwaye iziphumo ezifunyenweyo azilunganga. Kuyinyani ukuba uqikelelo belungasekho luhle kakhulu xa sijonga amanani entengiso ebeqikelelwe, kodwa kule meko aqinisekisiwe kwaye icandelo lekhompyutha ngokubanzi linengxaki yokwehla okubonakalayo kwintengiso.
Kule meko sinamashishini amabini abonisa amanani abo: iGartner kunye ne-IDC, ukuba sijonga kwaGartner bayachaza ukuba ukuthengiswa kwePC kwihlabathi liphela kwehle ngeepesenti ezingama-3,6 unyaka nonyaka kwaye kwimeko yee-Apple's Macs ukuhanjiswa kuthelekiswa nekota enye yonyaka ophelileyo, ingqalelo, ziwile nge-5,6%. Oku akulunganga kwaye iApple yinkampani yesibini ukuwa kakhulu kule kota, eyokuqala ngu-Asus. Sishiya igrafu:
Olu luqikelelo kwaye ngokucacileyo asinakutsho ukuba ngamanani asemthethweni, kodwa akukho mathandabuzo ukuba iikhompyuter zikwikota enzima. Kwelinye icala, inkampani yophando ye-IDC isibonisa amanani ahluke kakhulu kulawo kaGartner, ngokuhla kwentengiso ye-5% kwihlabathi liphela kunye ukukhula kwe-0,3% kwintengiso yeekhompyuter ze-Apple. Nalu uqikelelo lwabo:
Eyona nto imbi kuzo zombini ezi meko kukuba ukuthengisa iikhompyuter zizonke kwehlile kule kota kwaye oku ukuya kuthi ga kwinqanaba elincinci okanye elincinci yidatha esikhathazayo. Emva koko kukho umdaniso wamanani kwifemu nganye, kodwa ekugqibeleni le yinto esiyiqinisekisileyo kwakamsinya nge Idatha esemthethweni ka-Apple yale kota eya kupapashwa ngo-Novemba 2.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Le kota khange ilunge kuthengiso lweMac, kodwa hayi iiPC
Ama-64% abantu baseMelika banemveliso ye-Apple